Afaka hifidy Filohampirenena ireo Malagasy monina ao Frantsa amin’ny taona 2023. – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/Afaka hifidy Filohampirenena ireo Malagasy monina ao Frantsa amin’ny taona 2023.
Afaka hifidy Filohampirenena ireo Malagasy monina ao Frantsa amin’ny taona 2023.
Afaka handray anjara amin’ny fifidianana Filohampirenena ireo Malagasy miasa sy monina ao Frantsa manomboka ny taona 2023. Io no nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’izy ireo nandritra ny fihaonana tamin’ireo Malagasy any an-toerana androany.
Tsy maintsy misoratra anarana any amin’ny masoivoho avokoa ireo Malagasy rehetra hahazoany ny “carte consulaire”. Ampiana ny mpiasan’ny masoivohon’I Madagasikara ao Paris hahafahana misahana ireo fizarana isam-paritra miisa telo, araka ny fandaminana hapetraka, dia ny faritra avaratra, atsimo ary afovoany. “Fampanantenana efa natao izany ary tsy maintsy tanterahintsika” hoy ny Filoha Andry Rajoelina.
Ankoatra izay, nampahafantarin’ny Filoha an’ireo Malagasy monina sy mipetraka ao Frantsa ihany koa ireo tetikasam-pampandrosoana maro efa vita sy an-dalam-pahavitana ary ireo mbola hotanterahana eto Madagasikara. Isan’izany ny fanamboarana ny “téléphérique” mampitohy an’Ambatobe sy Ankatso ary atomboka amin’ity taona ity. Tetikasa izay vatsian’ny tahirim-bola frantsay. Eo ihany koa ny Kianja Barea izay isan’ny lehibe indrindra eto amin’ny ranomasimbe Indiana, ny tetikasa Miami, ny fananganana ny orinasa Pharmalagasy sy ny maro hafa.
Tanjona ihany koa hoy ny Filoha ny hapihena sy hamongatra ny kere any atsimon’ny nosy izay efa nisy an-taonany maro. “Tsy maintsy ho vitaina mandrapahatapitry ny fe-potoam-piasako ny fametrahana ny pipeline lehibe indrindra miala ao Taolagnaro, mihazo an’Amboasary sy Ambovombe” hoy izy. Tsy adinony ihany koa ny nampahafantatra ny Centre de réhabilitation nutritionnel et médical (CRNM) izay ivon-toerana manampy amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any main’ny faritra atsimo.
Namafisin’ny Filoha nandritra ny fihaonany tamin’ireo Malagasy miasa sy monina any Frantsa androany fa manana andraikitra hampamirapiratra sy hampandroso an’I Madagasikara izy ireo.
Le défilé du 26 juin Mahamasina sera à 15h 30
Haino aman-jery: hatsahatra ireo fandaharana ara-politika
Sommet de la SADC : l’impact de la Covid-19 sur l’économie des pays membres évoqué
Raharaha Appollo 21: misy mpanao politika ambony ao ambadika, hoy Rajoelina Andry
CFM : hametraka paikady hisian’ny fitoniana amin’ny fiatrehana ny fifidianana amin’ny 2023
Ntsay Christian : telo taona sy iray volana sy 11 andro androany no naha Praiminisitra azy.